အပျိုကြီးအတွေ့အပျိုကြီးအတွေ့ | CeleTrend
September 7, 2020 by CeleTrend
ကျွန်မမှာ အပျိုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ လူတစ်ကာက ကျွန်မကို အပျိုကြီးလို့အသိအမှတ်ပြုထားကြပါသည်။ အမှန်တော့ လင်ရယ်လို့ တစ်ကောင်တစ်မြီးမှမယူရသေးသော အပျိုကြီးတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မ ယခုအသက်(၃၈)နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်မကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ကျွန်မပစ္စည်းအနေနှင့်ဆိုလျှင် ကျွန်မသည် လင်တစ်ယောက်ကို ကောင်းကောင်းကြီး ခေါင်းခေါက် ယူနိုင်ပါသည်။ ကျွန်မကြွားပြောသည်မဟုတ်ပါရှင်…….ဘုရားစူးရစေရဲ့………ကောလိပ်ကျောင်းသား လူပျိုချောကလေးက အစ တည်ကြည်ခန့်ငြား အရာရှိမင်းဘုရားအဆုံး ကျွန်မ လင်တစ်ယောက်ကိုတော့ ကောင်းကောင်းကြီး ခေါင်းခေါက်ယူနိုင်ပါသေး တယ်ရှင့်…..။ ကျွန်မအသက် (၃၈)နှစ်ဆိုသော်လည်း အသက်(၃၀)လောက်ဟု ထင်ရအောင် နုဖတ်စိုပြေနေပါသည်။ ရုပ်ရည်က လဲကြွားပြောနေတာ မဟုတ်ပါ……….။ကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ဆွေမျိုးညာတိတွေက မင်းကတော်ဖြစ်ထိုက်သည့် ယဉ်ယဉ်ချောချော သည့် ရုပ်မျိုးဟု ပြောကြပါသည်။ ကျွန်မ အသားကဖြူဝင်းပါသည်။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က အနည်းငယ်မဆိုသလောက်လေး ၀ ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ကြည့်မကောင်း အောင် ၀ ခြင်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါ။ အစ်ကို ကာလသားတွေအကြိုက်……..အဟိ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက် တုတ်တုတ်ခဲခဲဝခြင်းမျိုး ၀ နေ ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ခါးကလေးကလည်း မဖြစ်စလောက်ကလေးသာ တုတ်နေပါသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် က ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမြင့်မြင့်ဌေး (ပုဇွန်ထုပ်ကြီး) ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်မျိုးမို့………ယောင်္ကျားငနဲသားတွေ တဏှာမီးပွားနေမည်က အမှန်ပါပဲရှင်………။ ကျွန်မရဲ့ရင်သားကြီးများသည် ပေါက်စီအတူ ဘရာစီယာခံရန်မလိုပဲ နဂိုသဘာဝအတိုင်းအစွမ်းကုန်ဆူထွား လုံးကျစ်နေရာ လိမ္မော်သီးလုံးတွေများဟုထင်မှတ်စရာကောင်းပါသည်။ လိမ္မော်သီးလုံးတွေထက်လည်း ကြီးထွားနေပါသည်ရှင့်။
ယောင်္ကျားလက်နှင့်တစ်ဆုပ်စာမကဆိုပါတော့ရှင်…..အဟိ…..တတ်နိုင်ပါဘူးလေ………..။ ပြီးတော့ ကာတစ်ခေါ် ကျွန်မတင်ပဆုံကြီးကလဲအားရစရာကောင်းလှသည် နောက်ဖက်သို့မသိမသာကောက်နေကာ အသား ဆိုင်ကြီးတွေက အဆီခဲနေပြီးကျောက်ကျောပြင်ကြီးလိုပဲ လမ်းသွားရင်တတုံတုံဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ ကျွန်မပေါင်တံကြီးတွေက လည်း တုတ်တုတ်ခဲခဲနှင့်ရွေဘိုမင်းကြိုက် ပေါင်တန်ရှည်ရှည်ကြီးတွေဘဲပေါ့လေ။ ကျွန်မရုပ်ရည်ကိုထားပါတော့…………။ ကျွန်မ ပစ္စည်းနှင့်ဘဝအဆင့်အတန်းကိုလည်း ကြည့်လိုက်ကြပါအုန်းရှင်…..။ ကျွန်မမှာ တစ်ဦးတည်းသောသမီးအဖြစ် ကွယ်လွန် သူ မိဘတွေထံမှ စိန်တစ်ဆင်စာ၊ ရွေခြေကျင်း၊ ရွေလက်ကောက်၊ ရွေလည်ဆွဲ၊ ရွေဘီး စသည်ဖြင့် လက်ဝတ်လက်စားတွေကဘဲ တစ်သောင်းကျော်ဘိုးလောက်အမွေတွေရခဲ့ပါသည်။ ပြီးတော့ အိမ်နှစ်လုံး၊ ငွေသားကသုံးသောင်း ဒီတော့ကျွန်မမှာငွေရေးကြေး ရေး စားရေးသောက်ရေးဘာမှပူစရာမလိုတော့ပါ။ ငွေတိုးချစားတာကဘဲ တစ်လတစ်လဝင်ငွေတစ်သောင်းကျော်လောက်စီနေပါ တော့တယ်။ တစ်ခြားအရောင်းအဝယ်လုပ်တာတွေကလဲရှိနေပါသေးသည်။ တစ်အိမ်ကိုငှား၍ ကျန်တစ်အိမ်တွင် ကျွန်မကိုမှီခိုနေ ရသော အဒေါ်တစ်ယောက်နှင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ် ငါမင်းငါချင်းနေနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်မို့လဲ ကျွန်မကလင်တစ်ယောက်ကိုတော့….ကောင်းကောင်းကြီးခေါင်းခေါက်ယူနိုင်ပါသေးသည်လို့ပြောနေရတာပေါ့….။ ဒါပေမယ့် ရှင်တို့အထင်မလွဲလိုက်ပါနဲ့….ကျွန်မမှာ လင်ကောင်းကောင်းယူနိုင်သေးသော်လည်း ဒီတစ်သက်တွင် လင်ယူဖို့စိတ်ကူး ထဲမထည့်တော့ပါ။ ဘုရားစူးရစေ့ လင်ယူရင် ကျွန်မအတွက်အချုပ်အချယ်ရှာတာပဲဆိုတာ ကျွန်မသာကျွန်မကောင်းကောင်းနား လည်မိပါတယ်။ လင်ယူတာထက် အခုလိုအပျိုကြီးလုပ်နေရသည်ကဘဲ ကျွန်မမှာလောကီအရသာတွေကို ကျပ်ပြည့်ဒင်ပြည့် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး ခံစားနိုင်တော့တာဘဲကို…………….။
ဟုတ်ပါသည်ရှင်…..ကျွန်မအပျိုကြီးလုပ်လာခဲ့သည်မှာ (၃၈)နှစ်တိတိရှိပြီဖြစ်သော်လည်း လောကီအရသာကိုတော့ တော်တော် ပဲ မခံစားဘူးသည့်မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပီရှင်…..။ လောကီအရသာ ဘယ်လိုပါကလားဆိုတာကို ကျွန်မစတင်ခံစားရတာက တော့ လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်လောက်ကဘဲဖြစ်ပါသည်။ အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်မကျေးဇူးတင်ရမည့်သူကတော့ ကျွန်မအဒေါ်ရဲ့သားဖြစ်သူ ခင်မောင်ဦး ပဲဖြစ်ပါသည်။ လောကီအရသာဘယ်လိုပါကလားဆိုတာကို ကျွန်မကိုအရင်ဦးဆုံး မျက်စိဖွင့်ပေးသူကတော့ ကျွန်မရဲ့ မောင်ဝမ်းကွဲလေးဖြစ်သူ ခင်မောင်ဦးဘဲဖြစ်နေပါတော့သည်။ အဲ့ဒီတုံးက ကောင်လေးမှာ အသက်(၁၈)နှစ်သားလောက်ဘဲရှိပါဦး မည်။ ဒါပေမယ့် ကောင်လေးကတော်တော်လည်ပါသည်။ အပေါင်းအသင်းကလဲတော်တော်များကာ ဂျပိုးကျချင်ပါသည်။ ကျွန်မနှင့်သူ့အမေ မနဲကြီးဆုံးမနှိမ်နင်းထားနေရတဲ့ အော့ကျောလန်လေးတစ်ယောက်ပေါ့။ ညတော့ ကောင်လေးမှာ ည(၁၀)နာရီ (၁၁)နာရီလောက်ထိ ရှောက်လည်နေပါတော့သည်။ အဲ့ဒီညက သူ့အမေကလဲဖျားနေရာ ကိုယ်တော်ချောကလေးကို ကျွန်မကဘဲ တံခါးဖွင့်ပေးရပါသည်။ လက်စသတ်တော့ ဘသားချောက အရက်တွေမူးလာတာကို ကျွန်မတွေ့ရပါ၏။ သူ့ကိုယ်သူမဟန်နိုင်ပဲ ဒယိမ်းဒယိုင်ဖြစ်နေပါတော့ရာ ကျွန်မကမြည်တွန်တောက်တီးရင်းကပင် သူ့ကိုတွဲ၍သူ့ အခန်းထဲလိုက်ပို့ရပါသည်။ ကောင်လေးကလဲမျက်စိမဖွင့်ပဲ ကျွန်မပခုံးကိုသာ သူ့လက်တစ်ဖက်နဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဖက်လို့ အိပ်ခန်းထဲရောက်လာကြပါတယ်
သူ့ကုတင်ဆီရောက်တော့ ကျွန်မက အိပ်ပေတော့လို့ဆိုပြီး သူ့ကိုမွေ့ယာပေါ်စိတ်ပေါက်ပေါက် နဲ့တွန်းချလိုက်မိပါတယ်….။ ဒါပေမယ့်ရှင် ကောင်လေးကကျွန်မပခုံးကိုဖက်မြဲဖက်ထားလေတော့ ကျွန်မပါအားလွန်ပြီး သူ့အပေါ် ထပ်လျက်သားကြီးလဲကျသွားမိပါတယ်။ ကျွန်မမှာ ရုန်းကန်ဖို့သတိမရတော့…….။ ကျွန်မပါးစပ်မှ တဟင်းဟင်းမြည်လာအောင် တစ်ကိုယ်လုံးရှိအာရုံကြောတွေ အတွေ့ဓါတ်လှိုင်းတွေကလှိမ့်တက်လာကြတော့ မျက်လုံးများကိုစင်း…ခြေတွေကိုကားလျက် မှိန်းနေလိုက်မိပါတော့တယ်။ သဲသဲမဲမဲကြီးဖြစ်နေသော ကောင်လေးကို ကဲ…………နင်လုပ်ချင်ရာလုပ်ပေတော့လို့ အခွင့်ပေးလိုက်သလိုပါဘဲရှင်…..။ ဒါပေမယ့် ကောင်လေးက တော်တော့ကိုပါးနပ်ပါသည်ရှင်။သူ့ကို ဤကိစ္စအတွက်တစ်စုံတစ်ယောက်က ကျကျနနလက်ထပ်သင်ပေးလိုက်မှသေချာပါသည်။ နောက်တော့မှ ကျွန်မသိရသည်မှာ ကျွန်မကိုပိုးနေသော အရပ်ထဲမှ ကိုစောမောင်ဆိုတဲ့လူပျိုကြီးတစ်ယောက်က ဤကိစ္စကိုကောင်လေး ခင်မောင်ဦးအား တစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့် ကျကျနနကြီးသင်ပေးခဲ့သည်ဆိုတာပါပဲ။ ကောင်ကလေးသည် လူပျို လူရိုင်းလေးမို့ ကျွန်မကိုချက်ချင်းလက် ငင်းတက်မခွခဲ့ပါ။ ကျွန်မရဲ့အင်္ဂါဇာတ်ကိုသူ့လက်ချောင်းကလေးတွေနဲ့ တရွရွဘဲပွတ်သပ်ကလိနေပါသည်။
ဒီကြားထဲ သူ့နှာခေါင်း နှင့်ပါးစပ်ကလည်း အလုပ်သိပ်ရွုပ်နေပါတယ်။ ကျွန်မပါးကိုတရွုံ့ရွုံ့နမ်းကြပါသည်။ ကျွန်မနွုတ်ခမ်းကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပါသည်။ နောက်ပြီးတော့လေ သိပ်ကဲတာဘဲ ကောင်လေးက မချင့်မရဲကြီးဖြစ်လာတော့သည့်အလား ကျွန်မရဲ့အဆီတထပ်အသားတထပ် ဝမ်းဗိုက်သားကြီးကို မျက်နှာအပ်ပြီး နမ်းလိုနမ်း ကိုက်လိုကိုက် ယက်လိုယက်နှင့် အို……..ရှင်….ကျွန်မစိတ်တွေနောက်ဆုံးတော့ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမနိုင်ထကြွသောင်းကျန်းလာရတော့တာပါပဲရှင်……။ ကန်တော့ပါရဲ့ရှင် ….. နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာတော်မူကြပါ…..။ ကျွန်မရဲ့အင်္ဂါဇာတ်မှာ တစ်ခါထဲဖောင်းကြွလာပါသည်။ အထဲမှလဲ သဘာဝအရည်ကြည်ကလေးတွေ စိမ့်ထွက်လာပြီး နူးအိစိုရွဲနေကြပါတော့သည်။ ခါတိုင်းဒီလိုဖြစ်ဖူးသော်လည်း ဤမျှလောက် တော့မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ထိုအခါများတွင် ပေါင်တန်များလိမ်ကျစ်ပြီးလည်းကောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ဖက်လုံးရှည်ကြီးကိုပေါင်ကြားထဲ ကျစ် ကျစ်ပါအောင် ခွထားလိုက်လျင်လည်းကောင်း စိတ်ဆန္ဒတွေကငြိမ်ကျသွားရတတ်ပါသည်။ ကျွန်မမှာ တစ်ခြားအပျိုကြီးတွေလိုခရမ်းသီးတို့ ဘာတို့မသုံးခဲ့ပါ။ အခုတော့ ကျွန်မအခြေအနေမှာ ခရမ်းသီးကိုပင်သုံးဦးတော့ ကျွန်မရဲ့ဆန္ဒမီးတွေကပြေငြိမ်းရတော့မည်မဟုတ်ပါရှင်….သဘာဝ ကြီးက စီမံထားသည့်အတိုင်းဖြေရှင်းမှသာ ကျွန်မပြဿနာကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးမည့် ကိုယ်တော်ချောကလေးကလည်း ကျွန်မဗိုက်ပေါ်တွင် ကားရားကြီးအသင့်ရှိနေတော့တာကိုး………..။ ကျွန်မဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပါ……ကောင်ကလေးရဲ့ ကျော ပြင်ကို တစ်အားသိုင်းဖက်လိုက်မိပါတယ်။ ‘ငဦးမင်းကလေးက သိပ်ကဲတာဘဲ’ မင်းကိုဘယ်သူများ ဒီအတတ်တွေကို သင်ပေးလိုက်တာလဲဟင်…..။
ကောင်ကလေးက ရယ်လိုက်ပါသည်။ ပြီးတော့ မမငြိမ်ငြိမ်နေနော်….ကျွန်တော်ပြောတာကိုလုပ် ဒီလိုဆိုရင် မမဟာလောကကြီး ကိုမေ့သွားရအောင်လို့ အရသာကောင်းကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့…..။ ကျွန်မလဲ ရှက်စနိုးလေးနဲ့ သူ့နဖူးကို ကျွန်မလက်သီးဆုတ် နဲ့ထုပစ်လိုက်မိတာပေါ့ရှင်…။ ကောင်လေးက ကျွန်မပါးကိုတစ်ချက်မွေးလိုက်ပါသည်။ ပြီးတော့ ကျွန်မပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ သူ့ဒူး တွေကို ထိုးသွင်းလိုက်ပါသည်။ မမ ဒူးနှစ်လုံးကိုအသာကလေးထောင်ထားလိုက်စမ်းပါတဲ့သူကလေးကို ကျွန်မက ကျေကျေနပ်နပ်ပဲ စစ်သူကြီးအရာထားလိုက်ပြီး သူပြောသလိုပဲ ကျွန်မပေါင်တွေဟပေးလျက် ဒူးထောင် လိုက်မိပါသည်။ ဟောရှင်…..ဗြုံးဆိုမာကျောပြီးနူးညံ့တဲ့အသားတုံးလေးတစ်ခုက ကျွန်မရဲ့ပြူးဟနေတဲ့အောက်တံခါးဝကို ပြွတ်ဆို လာတေ့လိုက်ပါတော့သည်။ ကျွန်မမျက်လုံးများကိုစုံမှိတ်ထားလိုက်ပါသည်။ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပေါ်က ကောင်ကလဲသွက်သွက်ကြီး လွုပ်ရှားလာပါတော့သည်။ ကျွန်မရဲ့ထောင်ထားတဲ့ပေါင်ကြီးတွေကို ကောင်လေးကအားရပါးရကြီးဖက်လိုက်ပြီး သူ့ခါးကလေးကို ကော့လိုက်တော့….အမလေး လျောကနဲ သူ့ဟာကြီးကချောချောမောမောနဲ့ ကျွန်မအထဲကိုဝင်သွားတော့တာဘဲပေါ့ရှင်အဟိ။ အို…..အရသာ….အရသာ…..တစ်မျိုးကြီးပါပဲရှင်။ ပထမဦးဆုံးနဲနဲကလေး နာသွားပါသည်။အိုး…ကျွတ်ကျွတ်လို့ကျွန်မစုပ်သပ်လိုက်မိတော့ ကောင်ကလေးကဘာလဲ မမ နာသလားတဲ့…..နာတာပေါ့ဟဲ့ နင်ကငယ်သာငယ်တာ ဟိုဟာကတော့အကြီးသားဟဲ့လို့ကျွန်မက စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ပြန်ဖြေလိုက်မိပါတယ်။ခဏပါမမရယ်….နောက်ကျတော့ ကောင်းလာမှာပါလို့ကာင်လေးကပြန်ဖြေရင်း သူ့အလုပ်ကိုသွက်သွက်ကြီးစလုပ်လာပါ တော့သည်။
ပထမတော့နာပါသည်။ နောက်ကျတော့ သူပြောသလိုပင် ကောင်းလာပါသည်ရှင်…အဟိ။ ကျွန်မက အပျိုကြီးဆို တော့ အပျိုမြှေးမရှိတော့ပါ။ သူ့ဘာသာသူပေါက်သွားပြီ ဒီတော့ ကောင်လေးကသူ့ရဲ့မာကျောသန်မာတဲ့ တန်ဆာနဲ့ ကျွန်မရဲ့ သော့အိမ်ကိုလေးငါးချက် ဆင့်ကာဆင့်ကာဆောင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ နာကျင်မွုကပျောက်သွားပြီး ဆိမ့်သလို အီသလို အရသာ ကို ကျွန်မကထွန့်ထွန့်လူးအောင်ကိုခံစားလာရပါသည်။ကျွတ်…..ကျွတ်ဟုစုတ်သပ်ရာက ကျွန်မက တဟင်းဟင်းငြီးငြူလာမိပါသည်။ ကောင်ကလေးရဲ့ခါးကို ကျွန်မက အားမလို အားမရနှင့်ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်မိပါသည်။ ကောင်ကလေးကလည်း ကြမ်းသထက် ကြမ်းလာပါသည်။ သူ့ပါးစပ်က အင့်ကနဲ……. အင့်ကနဲနေအောင် သူကဆောင့်၍ ဆောင့်၍ချပါသည်။ ကုတင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာ သွက်သွက်ခါအောင်လွုပ်ရမ်းလာရပါသည်။ငဦး…..ဖြေးဖြေးဟဲ့….ငလျင်လွုပ်တာကျနေတာပဲ တော်တော်ကြာနင့်အမေသိသွားလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မက သူ့ကိုသတိပေးယူရပါသည်။ ဒါပေမယ့် ကောင်လေးက ကဲပင်ကဲပါသည်။ကျွန်မက ချက်ချင်းဘဲ ပြန်ထရန်ကြိုးစားသော်လည်းမရတော့ပါ။ ဘယ်ရမလဲ……ဘသားချောက ကျွန်မရဲ့ခါးကိုသူ့လက်နှစ်ဖက် စလုံးနဲ့ မလွတ်တမ်းဖက်ထားတော့တာပဲရှင့်…..။ဟဲ့ ငဦး လွတ်လေ ဘာလို့ငါ့ကိုဖက်ထားရတာလဲကျွန်မက ခပ်ငေါက်ငေါက်ကလေးဘဲပြောလိုက်သော်လည်း…ကိုယ်တော် ချောကလေးက ကျွန်မကိုပိုလို့သာဘဲ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဖက်ထားပါတော့တယ်။မလွတ်ဘူး မမစိန်ရယ်……ကျွန်တော် မမစိန်ကိုသိပ်ချစ်တာပဲ…. မမစိန်က မြင့်မြင့်ဌေးနဲ့သိပ်တူတယ်……မမစိန်ကို ကျွန်တော် စွဲနေတာ ကြာလှပြီခင်မောင်ဦးလေးက ကျွန်မကို အဲ့ဒီလို မူးမူးရူးရူးနဲ့ပြောရင်းက ကျွန်မရဲ့ယင်ဖိုမသန်းဖူးသေးတဲ့ ပါးကလေးကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်နဲ့ တရွတ်ရွတ်နေအောင်နမ်းပစ်လိုက်ပါတော့သည်ရှင်။
အိုး…ကျွန်မဆိုတာ မွန်ထူသွားမိတော့တာပါဘဲရှင်။ ယောင်္ကျားတစ်ယောက် ရဲ့ အတွေ့အထိဆိုတာကို ကျွန်မကတစ်ခါမှမခံဘူးသေးတဲ့ အပျိုကြီးစစ်စစ်ကိုရှင့်….။ဟဲ့……ဟဲ့….ငဦး နင်ဘာလုပ်တာလဲ ဟင်ကျွန်မထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ပြောမိပါသေးသည်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ်ပြောလို့မရတော့ပါ။ ဘယ်ရတော့မလဲ။ ငတိလေးက ကျွန်မ ရဲ့နွုတ်ခမ်းကိုသူ့နွုတ်ခမ်းနဲ့ငုံခဲပြီး အမေရိကန်ဘိုင်စကုပ်ထဲက ဇာတ်လိုက်နှင့်ဇာတ်လိုက်မလို တစ်ခါထဲစုပ်ယူနေတော့တာကိုရှင့်။ ကျွန်မမှာ လောကကြီးကိုမေ့သွားသလိုရှိပါသည်။ ရင်ထဲက တလှိုက်လှိုက်နဲ့မောဟိုက်သလိုလိုဘဲလေ။ ပြီးတော့ မရှက်နိုင်ပါဘဲ ဆီးစပ်ကြောတွေကလဲ ထောင်တက်လာတယ်ထင်ရတယ် တင်းလာမိတော့တာဘဲ။ ကျွန်မသတိပြန်ရလာသလိုလိုရှိတော့ ကျွန်မ ကိုယ်မှာ မွေ့ယာပေါ်တွင်ပက်လက်ကြီးလန်နေပြီး ကောင်လေးရဲ့ကိုယ်ဟာ ကျွန်မကိုမလွုပ်နိုင်အောင်လေးလေးကြီးဖိထားနေ တာကိုတွေ့ရပါသည်။ ကောင်လေးကတော်တော့ကိုသန်ပါသည်။ ကျွန်မဘယ်လိုမှ မရုန်းနိုင်ပါ၊ အမှန်ကိုဝန်ခံရရင် ကျွန်မရုန်းဖို့ကို လည်း သတိမရတော့ပါ။ လူတစ်ကိုယ်လုံးသွေးတွေက တဖိန်းဖိန်း တရှိန်းရှိန်းတက်လာနေသလိုပါဘဲ။ ဟော….ဗြုံးဆို ကောင်လေးရဲ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်မခါးကိုလျှိုပြီး ဇာဘော်လီအောက်စထဲကိုစွပ်ကနဲဝင်လာပါတော့သည်။ ပြီးတော့……ပြီးတော့…..ကျွန်မရဲ့ဝါဂွမ်းလိုနူးညံ့တဲ့ သားမြတ်အသားစိုင်အသားခဲကိုလာပြီး အုပ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်နေပြန်တော့သည်။ဟဲ့ ငဦး နင်ဘာလုပ်နေတာလဲဟင်…ကျွတ်……ကျွတ်….ကျွန်မက အံလေးကျိတ်ပြီး ခေါက်ဆိုမိပါသည်။ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းပါ မမရယ်…မမကို ကျွန်တော်က လောကနိဗ္ဗာန်ကို ခေါ်သွားမလို့ပါ။ ကောင်လေးကပါးစပ်ကပြောရင်း လက်ကအလုပ်များနေပါသည်။
ကျွန်မရဲ့ရွေရင်အုံကို သူ့လက်ကအားရပါးရ ဆုပ်နယ်ချေမနွေ ရာက ဟောလေ ရင်အုံထိပ်ကပတ္တမြားခဲအသီးနှစ်လုံးကို တရွရွနဲ့ပွတ်သပ်ပေးနေပြန်ပါတော့တယ်ရှင်။ ကျွန်မထူးခြားသောအရသာခံစားရပြီး မျက်တောင်တွေစင်းကျသွားပါတော့သည်။ ဒီအထဲကောင်လေးက ကျွန်မရဲ့မဟတဟပွင့် နေတဲ့ နွုတ်ခမ်းကလေးကို သူ့ပါးစပ်နဲ့အပ်ငုံပြီး တစ်အားစုပ်လိုက်ပြန်ပါတော့သည်။ ဒါတွင်သာလဲမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်တို့ရယ် ကျွန်မရဲ့နွုတ်ခမ်းအတွင်းသားတွေထဲကို သူ့လျှာဖျားကလေးထိုးသွင်းပြီး ဟိုပွတ်ဒီပွတ်နဲ့လုပ်နေပြန်ပါသည်။ ကျွန်မဆိုတာက တစ်မျိုးကြီးပါဘဲလေ။ ရင်ထဲလှိုက်၍လှိုက်၍လာရာ အသက်ကို ရှိုက်၍ရှိုက်၍ရွုမိရင်းက ကျွန်မရဲ့တစ်ကိုယ်လုံးက သွေးကြောတွေက တကြိုက်ကြိုက်နေအောင် ဆူပွက်လာမိတော့သည်။ ငဦးကို ဘယ်သူကများ လက်ထပ်သင်ပေးလိုက်တယ်မသိပါ။ ကောင်ကလေးက တော်တော်ကိုကျွမ်းကျင်နေပါသည်။ ကျွန်မပါးစပ်ထဲ သူ့လျှာထိုးသွင်းရုံသာမဟုတ်တော့ဘဲ ကျွန်မအောက်ပါးစပ်ထိကိုသူ့အောက်လျှာထိုးသွင်းရန်လည်းအားကြိုးမာန်တက်ကြိုးစားနေပါတော့သည်။ သူ့ရဲ့အစုပ်အနမ်း အပွတ်အသပ် အဖျစ်အညှစ်တွေကိုခံစားထားရတဲ့ ကျွန်မမှာမောဟိုက်ပြီး ခြေတွေလက်တွေက မလွုပ်ရှားချင် ဖြစ်နေတာမို့ ကျွန်မခါးကထမီစကို သူက ဖြုတ်ကနဲ ဆွဲဖြေချလိုက်တာကို ကျွန်မဘာမှမတတ်သာဘဲရှိနေခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မထမီ သည် ကျွန်မခါးမှလျှောကနဲပြေသွားပြီး ဒူးဆစ်များဆီသို့ လုံးထွေးရောက်သွားပါသည်။
ကျွန်မကထမီကို လိုက်ဖမ်းသေးသော်ငြား ထမီကိုမမိ မဟုတ်တာကိုသွားမိလိုက်ပါသည်။ ဤတွင် ကျွန်မလက်မှာလျှပ်စစ်လိုက်သကဲ့သို့ ကျင်တက်သွားမိလိုက်သည်ဟုထင် မိပါသည်။ အကြောင်းမူ ကျွန်မယောင်ယမ်းကိုင်လိုက်မိတာက ကောင်လေး၏မာန်ထနေသော ဟိုဟာငေါက်တောက်တောက်ကြီးပင်ဖြစ်နေ ပါတော့သည်။ ကျွန်မသည် လန့်ဖြန့်ပြီး ပထမတော့တစ်အားဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်ပါသည်။ တကထဲ တစ်ခါမှမကိုင်ဘူးတာကိုင်လိုက်မိတော့ လန့်သွားမိတာပေါ့ရှင်။ ပြောပါရစေတော့ရှင်…..ကောင်လေးဟာက အလွန်မာထန်လာတာမို့ အင်မတန်မှ ထွားထွားကြိုင်း ကြိုင်းမာမာတောင့်တောင့်ကြီးဖြစ်နေပါသည်။ လုံးပတ်က ကျွန်မရဲ့လက်ကောက်ဝတ်နီးပါးလောက်တောင်ရှိလိမ့်မလားမဆိုနိုင်ပါ။ နောက်တော့ ကျွန်မက ဆတ်ကနဲပြန်လွတ်လိုက်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ရှင် ကျွန်မရင်ထဲမှာတော့စိတ်တွေကဗလောင်ဆူလျက်ရှိနေပါ ပီရှင်။ ဒီအတောအတွင်း ကောင်ကလေးရဲ့လက်တွေကလည်း ထမီကင်းနေတဲ့ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာသောင်းကျန်းမွေ နှောက်နေပါသည်။ ပထမ ကျွန်မရဲ့ချက်တဝိုက်က ဝမ်းပျဉ်းသားဆူဆူအိအိကလေးကို ကောင်လေးသည် ယားကျိကျိနေအောင် ပွတ်သပ်ပေးပါသည်။ ကျွန်မခါးကလေးတလွန့်လွန့်နှင့် ယားကျိကျိနေရာကပင် အရသာတစ်မျိုးတွေ့နေရပါသည်။ကောင်ကလေးရဲ့ လက်ကတဖြေးဖြေးအောက်လျောကျသွားတော့ရာက ဟော ဗြုံးဆို အသားလေးဖောင်းမို့တက်လျက်အထစ်ကလေးလိုဖြစ်နေသော ကျွန်မရဲ့အမွေးစိမ်းဖုံးလွမ်းနေသော ဆီးခုံကလေးဆီသို့ ရောက်သွားကြပြန်ပါတော့သည်။
အဲ့ဒီနေရာကို သွားစမ်းမိတော့ကောင်ကလေးကပိုလို့သာ မာန်ထကြွလာတော့တာပဲရှင်။ လက်ချောင်းကလေးတွေက ကျွန်မရဲ့အာ ရုံကြောစုဝေးတည်ရှိရာ သရဖူကလေးကိုမရွံမရှာ လာရောက်ကိုင်တွေ့ကြပါသည်။ တရွရွကလေးပွတ်သပ်ပေးကြပါသည်။ ဒီအဖွား ကြီးက အဖျားတက်ပြီး ခေါင်းမထူနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာပါဗျဆိုပြီး ဆက်ပြီးသာအားကြိုးမာန်တက်ဆောင့်ပါသည်။ သူ့ထိပ်ဖျားလေး သည် ကျွန်မသားအိမ်ဝကိုလာ၍ လာ၍မှန်မှန်ကြီးထိလာပါသည်။ ကျွန်မမှာလဲဘယ်အငြိမ်နေနိုင်တော့မှာလဲ ကျွန်မရဲ့ဆီးစပ်ကို ကော့၍ကော့၍ပေးရင်း သူ့အဆောင့်ကိုဆီးကြိုမိပါသည်။ ကျွန်မ၏တင်ပါးကြီးတွေကို ခွဲထားရာမှညှစ်ထာမိပါတော့သည်။ ကျွန်မ၏ အင်္ဂါဇာတ်တစ်ခုလုံးဟာလဲ အရည်ကြည်တွေနဲ့တရွဲရွဲစိုနေပါပြီ အရသာကလဲတရှိန်းရှိန်းနဲ့မြင့်တက်လာပါသည်။ ကောင်လေးပြော သလိုပဲ တစ်ချီတစ်ချီတွင် လောကကြီးတစ်ခုလုံးကို မေ့သွားမတတ်ဖြစ်ကာ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဖက်ထားနေမိပါသည်။ ကောင်ကလေးကလဲ ကျွန်မပေါ်တွင်းဒူးထောက်နေရာကနောက်ဆုံးတွင် ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုလှဲချလိုက်ပါသည်။ နှစ်ယောက် သားကိုယ်ချင်းထပ်ကာ သူကကျွန်မပခုံးတွေကို တင်းကြပ်စွာဖက်ထားပြီး ကျွန်မကသူ့တင်ပါးတွေကို လက်နှင့်အုပ်ကိုင်လျက်…. အတင်းဖိထားမိပါသည်။ သူ့ရဲ့တင်ပါးဟာ ကျွန်မလက်ထဲမှာဘဲ အပေါ်မြင့်တက်လိုက် အောက်ကိုအရှိန်နဲ့နိမ့်ကျသွားလိုက်ဖြစ်နေ ပါသည်။ ကျွန်မကလဲ ခါးအားယူပြီးဆီးစပ်တို့မှ အချက်မှန်မှန်ကော့ပေး တင်ပါးကြီးတွေကိုကြွပေးလုပ်နေပါသည်။ အဲ့ဒီလိုလုပ်ကြ တော့ အရသာကတစ်မျိုးထူးခြားလာပါသည်။ ကျွန်မရဲ့မို့မို့ထွားထွား လုံးလုံးကျစ်ကျစ် သားမြတ်ရင်သားကြီးတွေဟာ ကောင်လေး ရဲ့ ရင်အုပ်ကလေးတွေအောက်မှာ ပိပြားနေပြီးတစ်မျိုးသာယာမွုရနေပါသည်။
ကောင်ကလေးရဲ့ဗိုက်သားရှပ်ရှပ်ကလေးကလဲ ကျွန်မရဲ့အနည်းငယ်ဆူထွားတဲ့ဗိုက်သားနုနုမှာ လေတိုးလို့မရနိုင်အောင်ပိုပြားကျ နေကာ အဲ့ဒီလိုအတွင်းသားချင်းထိမွုသည် ယားကျိကျိနှင့်တစ်မျိုးပင်ခံလို့ကောင်းလှပါတော့သည်။ ဒါပေမဲ့ အရသာအရှိဆုံးကတော့ ကျွန်မနှင့်ကောင်လေးရဲ့တန်ဆာနှစ်ခု ဆက်စပ်မွုပါပဲရှင်။ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နှင့် သွက်သွက်ကြီးအလုပ်ရွုပ်နေသည့်ကောင်လေး ၏တန်ဆာမှာ အလုပ်လုပ်နေရင်းကပင် တစထက်တစပို၍ကြီးထွားသန်မာလာသည်ဟုထင်ရပါသည်ရှင်။ ကြာလာတော့ သူ့အသား တောင့်ကြီးက ကျွန်မရဲ့အင်္ဂါစပ်အခေါင်းတွင်းဝယ် မဆန့်မပြဲဖြစ်လာပြီး ကျွန်မဟာလေးကွဲထွက်သွားမလားပင် ထင်မှတ်ရပါသည်။ ကျွန်မရဲ့ အတွင်းနံရံနုကလေးတွေကလဲ သူ့ဟာကြီးရဲ့ပွတ်တိုက်ချက်အရ ကြာတော့ကျိန်းစပ်စပ်ကြီးဖြစ်လာပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါ ကလဲ အရသာတစ်မျိုးဖြစ်နေပါသည်။ ကျွန်မကလဲ သူသွက်သလောက် အားကျမခံအောက်ကနေလိုက်သွက်နေမိပါသည်။ သူက ဆောင့်အချ ကျွန်မကကော့အပေး သူ့ဆီးစပ်နှင့်ကျွန်မဆီးစပ်သည် တဖတ်ဖတ်အသံမြည်လာအောင်ပင်တွေ့ဆုံလာကြပါသည်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံး စိတ်ဇောတွေကို လွတ်ပေးလိုက်မိကြပါသည်။ တစ်ခြားဘာကိုမှသတိမရတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ် ယောက် မလွတ်တမ်းဖက်တွယ်ထားမိနေကြပါသည်။
နှစ်ယောက်စလုံးက အပြင်းအထန်လွုပ်ရှားထကြွနေသည်မို့လည်း ကုတင် တစ်ခုလုံးသာမက အိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးပင် ငလျင်လွုပ်သလို လွုပ်ရှားနေသလားမပြောတတ်ပါရှင်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ကဂရုမစိုက် ရောက်ကာနီးနေသောတောင်ထိပ်ဆီသို့လက်ချင်းယှဉ်တွဲကာ အပြေးချီတက်နေကြပါတော့သည်။ တလှိုက်လှိုက်မောသည်ကို ဂရုမစိုက်နိုင် ရောက်ခါနီးသုခရိပ်မြုံစခန်းကိုသာ အင်တိုက်အားတိုက်ကြီးချီတက်နေမိကြပါတော့သည် လေ။ ကျွန်မအင်္ဂါဇာတ်တွင် ရုတ်တရက်အရည်တွေစိုရွဲကာပူကနဲဖြစ်သွားမိပါသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့အင်္ဂါဇာတ်ကထွက်သည့်အ ရည်တွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ငတိလေးရဲ့ ရတနာရွေပြွန်က အရှိန်နှင့်တွန်းထုတ်လိုက်သည့် ရတနာရွေရည်တွေဖြစ်နေပါသည်။ အဲ့ဒီအခါမှာ ကောင်လေးမှာ ကျွန်မကိုယ်ပေါ်တွင်ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်အကြောဆွဲနေသလိုဖြစ်နေပါသည်။ အံကိုကျိတ်ကာသူ့အချောင်း ကို ကျွန်မအခေါင်းထဲတွင် မလွုပ်တော့ဘဲ အတင်းသာဖိသွင်းထားပါတော့သည်။ ကျွန်မရဲ့ ပခုံးများကိုလည်း ကြေမွသွားတော့မ တတ်ဖက်ထားလိုက်ပါသည်။ သူ့အရည်တွေကလည်း အနှစ်နှစ်အလလက စုဆောင်းထားသည့် လူပျိုရည်တွေမို့လားမပြောတတ် တသွင်သွင်အရှိန်နှင့်ပန်းထွက်နေကာ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မရဲ့အခေါင်းတစ်ခုလုံးတွင် လျှံထွက်ကုန်ပါတော့သည်။ ဒီအချိန်မှာပင် ကျွန်မရဲ့တစ်ကိုယ်လုံးရှိ သွေးသားအကြောအခြင်တွေဟာ ပြတ်ထွက်လုမတတ်တောင့်တင်းလာကြသည်ဟု ထင်မှတ်လိုက်ရကာ အကြောပေါင်းတစ်ထောင်စိမ့်သွားသည်ဟု ထင်ရအောင်ပဲ အရသာထူးထူးခြားခြားကြီးကို မေ့သွားလုမတတ် ခံစားလိုက်ရပါတော့ သည်။
ကျွန်မသည်မျက်စိကိုစုံမှိတ်ထားလိုက်ပါသည်။ ကျွန်မလက်နှစ်ဖက်နှင့်သူ့တင်ပဆုံတွေကိုဖိနှိပ်ကာ ကျွန်မဆီးစပ်ကို အစွမ်းကုန် ကော့တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ဒါနှင့်လည်းအားမရနိုင်သေးဘဲ ကျွန်မပေါင်ကြီးတွေကို သူ့ပေါင်တွင် အတင်းလိမ်ယှက်ထားလိုက်မိ ပါတော့သည်။ ဒီလိုနေရင်းနဲ့ ကောင်လေးရဲ့ရတနာရွေပြွန်လည်း အထွက်ရပ်သွားပါသည်။ ပြီးတော့ အံ့သြသွားရလောက်အောင် ပင် သူ့အတန်ကြီးသည် မာကြောတောင့်တင်းနေရာက ချက်ချင်းဘဲပျော့ခွေကျသွားသည်ကို ကျွန်မသိလိုက်ရပါသည်။ ကောင်လေးသည် ကျွန်မကိုယ်ပေါ်ကတော့မဆင်းပါလေ မွေ့ယာကြီးပေါ်တွင် ခြေပစ်လက်ပစ်စင်းစင်းကြီး အိပ်နေပါသည်။ ပါးစပ်ကလေးဟပြီး ဟောဟဲ ဟောဟဲ ဖြစ်နေ၍လည်း တော်တော်မောဟိုက်နေပုံရပါသည်။ ကျွန်မကောင်လေးကို တော်တော်ဘဲ သနားသွားမိပါသည်။ သူ့နဖူးတွင်စို့တက်နေသည့် ချွေးပေါက်ကလေးတွေကို ကျင်ကျင်နာ နာကြီးပဲ ကျွန်မရဲ့အင်္ကျီလက်နှင့်သုတ်ပေးပြီး……သိပ်မောနေသလားဟင်မောမှာပေါ့ နင်ကလေးက သိပ်ကဲတာကိုး ဟု ဂရုဏာဒေါသကလေးနှင့်ကြိမ်းလိုက်မိပါသည်။တိုတိုပြောရလျှင် အဲ့ဒီနေ့ကစပြီး ကျွန်မမှာ လောကီအရသာဆိုတာ ဒီလိုပါ ကလားဟု သိလာရသော အပျိုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာရပါသည်။ ထိုသို့ သိပြီးသည့်နောက်တွင်လည်း အသိနောက်ကျရလေမိ ခြင်းဟု ကျွန်မမှာ ကုန်လွန်ခဲ့ရသော အချိန်တွေကို အားကြီးဘဲနှမြောလာမိပါတော့သည်။ စောစောကသိရလျှင် ဤလောကီအရ သာ ဆိုတာကို ကျွန်မဘယ်လက်လွတ်ချင်တော့မှာလဲရှင်။ ဒါကြောင့်လဲ ကောင်ကလေး ခင်မောင်ဦးကို ကျွန်မကကျေးဇူးဆပ်တဲ့ အနေနှင့်များစွာ အရေးပေးမြှောက်စားထားခဲ့ပါသည်။
လက်ပတ်နာရီ၊ လက်စွပ်ဆိုတာတွေကို ဝယ်ဆင်ပေးလိုက်ပါသည်။ အဝတ်အစားဆိုတာကိုလဲ ကောင်းပေ့ဆိုတာတွေကိုဝယ်ပေးလိုက်ပါသည်။ မုန့်ဖိုးဆိုတာလည်း တစ်နေ့ငါးကျပ်လောက်ပေးထား လိုက်ပါသည်။ ကောင်ကလေးကလည်း ကျွန်မကိုကောင်းကောင်းကြီးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သူ့ကျေးဇူးဆပ်ပုံကလည်း ကျွန်မအတွက်ကျေနပ်စ ရာကြီးဖြစ်နေပါသည်။ ကျွန်မထံ ညလူခြေတိတ်ချိန်ဆိုလျှင်လာအိပ်ပြီး ညလုံးပေါက်နီးပါးမျှ ကျွန်မကိုလောကနိဗ္ဗာန်သို့ အနည်း ဆုံး နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကြာတော့ကောင်လေးမှာချောင်လာပါသည်။ ကျွန်မထံ မလာတစ်ည လာ တစ်ညဖြစ်လာပါသည်။ ကျွန်မကတော့ အသိနောက်ကျသောအရသာကိုခံစား၍ အားမရနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါသည်။ ဒါကြောင့် ကျွန် မမှာ အကြံတစ်ခုရလာခဲ့ပါသည်။ ကောင်လေး ခင်မောင်ဦးအားတစ်ညတွင် ကျွန်မက ချော့မော့ကြည့်ရာ ကျွန်မကိုဒီလိုဒီလိုလုပ် ဟု ကျကျနနသွန်သင်ဆရာလုပ်သူမှာ အရပ်ထဲကလူပျိုသိုးကြီး ကိုစောမောင်ဖြစ်နေသည်ကို ကျွန်မသိခဲ့ရပါသည်။ဒီလူကြီးက မမစိန်ကိုအသေအလဲကြိုက်နေတာဗျ……မမစိန်ကြိုက်ရင်……….ကျွန်တော်ပြောပေးပါ့မယ်……လို့လဲ ပြောလာပါ သည်။
ဘာလဲ နင်ငါ့ကို မချစ်ချင်တော့ဘူးလားလို့ ကျွန်မကသူ့ကိုဗိုက်ခေါက်လိမ်ဆွဲပြီး မေးလိုက်ပါသည်။မမကို ကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် မမကို ကျွန်တော်ချစ်ရတာ သိပ်ကိုမသက်သာလှဘူး……အခုလူကိုကြည့်ပါလား……. တော်တော့ကိုချောင်ကျသွားတာဘဲ….ဘာလဲ နင်ဘဲငါ့ကို အစလုပ်ပေးပြီးတော့…..အခုတော့ ညည်းနေပြီလား………..မညည်းပါဘူးဗျာ…ဒါပေမယ့် မမကို ကျွန်တော့်ထက်အစွမ်းကောင်းကောင်း အလိုဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့လူလိုချင်ရင် ကျွန်တော်မိတ် ဆက်ပေးမယ်လို့ စေတနာနဲ့ပြောတာပါ……ဒီလူက ကိုစောမောင်ကြီးဘဲ….ဒီဘက်မှာ နာမည်ကြီးဗျ…..ဒီရပ်ကွက်ထဲမှာ သူနဲ့ကင်း တဲ့ မိန်းမဆိုလို့ မရှိသလောက်ပဲ……..သူ့ကို မိန်းမတိုင်းကလဲ တစ်ခါတွေ့ဖူးရင် ဆွဲတာပဲ….ကျွန်မမှာ ကောင်လေးအပြောကောင်းတာတစ်ကြောင်း…..ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလဲ ဒီလူကြီးအကြောင်းကို သိချင်တာကလဲတစ် ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဒီကိုစောမောင်ဆိုတဲ့လူကြီးနဲ့ အဆက်လုပ်ရန် သဘောတူညီမိပါသည်။
တိုတိုပြောရရင် ကိုစောမောင်နဲ့ကျွန် မ ချိန်းတွေ့တဲ့ညကိုတော့ တစ်သက်မေ့နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မအိပ်ခန်းထဲတွင်ပင် သူနှင့်ကျွန်မချိန်းတွေ့ကြပါသည်။ စကားလေးတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းပြောရရုံရှိသေး သူက စတင်လာပါတော့သည်။ ကျွန်မကိုယ်ကြီးကို သူ့ပေါင်ပေါ်တွင်ပစ်လဲချလိုက်ကာ ကျွန်မပါးမို့မို့ကြီးတွေကို သူ့နှာခေါင်းဖြင့် လှိမ့်လှိမ့်၍နမ်းပါတော့သည်။ ပြီးတော့ ကျွန်မကိုပါးစပ်ဟခိုင်းကာ ကျွန်မလျှာဖျားလေးကို သူ့နွုတ်ခမ်းကြီးတွေနှင့်တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ယူပါတော့သည်။ ကျွန်မမှာ တစ်ကိုယ်လုံးထွန့်ထွန့်လူးသွားပါတော့သည်။ ချစ်သွေးတွေ တရှိန်းရှိန်းတက်ကြွလာပါသည်။ ကျွန်မရဲ့အင်္ကျီကြယ်သီး တွေကို တစ်လုံးချင်းသူဖြုတ်နေတာကို ကျွန်မမတားမိတော့ပါ။ အင်္ကျီပွင့်သွားတော့ သူက ဘော်လီကိုဖွင့်ပြန်ပါသည်။ ကျွန်မရဲ့ ဝင်းဝါအိထွားပြီးခုံးမို့နေသည့် သားမြတ်နှစ်ခုက ပွင့်ကန်ထွက်လာကြတော့ သူကလက်ကြီးနှစ်ဖက်နှင့်ထင်သလို ကလိပါတော့၏။ ကျွန်မရဲ့အသီးလေးတွေက ထောင်တက်လာကြတော့ သူက သူ့လျှာဖျားလေးတို့ကာ ကလိပါတော့သည်။ ယားကျိကျိနေတာမို့ ကျွန်မကိုယ်လုံးကြီးမှာ ထိုးထိုးထွန့်ထွန့်ဖြစ်လာပါသည်။ ပြီးတော့ရှင် ကျွန်မရဲ့နို့သီးနှစ်ဖက်စလုံးကို သူ့ပါးစပ်ကြီးနဲ့ ငုံပြီး ကလေးနို့ စို့သလို အားရပါးရကြီး ကုန်းစို့နေရာ ကျွန်မမှာ တဟင်းဟင်း ပါးစပ်ကမြည်လာမိရာ နို့ရည်တွေများထွက်တော့မလားဟု ထင်မှတ် မိပါတော့သည်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မက ဟန်ဆောင်မနေနိုင်တော့ပဲ အင်္ဂါဇာတ်တစ်ခုလုံးအခေါင်းထဲတွင် အရည်တွေရွဲထွက်လာအောင် ဆာလာမိပါတော့သည်။ သူ့လက်က ကျွန်မကိုဆက်၍ကလိနေပါသည်။ ကျွန်မရဲ့ကားစွင့်တဲ့ တင်ပဆုံကြီးကို ထမီကြားထဲလက် လျှိူသွင်းပြီး အားရပါးရ ဂျုံနယ်သလိုဆုတ်နယ်နေရာ ကျွန်မထမီခါးမှပြေကျပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့လျှောကနဲဆင်းသွားပါသည်။ ကျွန်မဟာ စိမ်းကနဲပေါ်လာရာ သူက မီးရောင်တွင်ကျကျနနကြည့်ပြီး အားပါး…..အားရစရာကောင်းလိုက်တာ စိန်ရယ် ဟု ထုတ် ဖော်ချီးကျူးလိုက်ပါသည်။ဟိန္ဒူတို့ ပန်ချာပီတို့က သေသွားကာနီးကျရင် ဟောဒီလိုလုပ်တတ်တယ်ကိုစောမောင်က ပြောပြောဆိုဆိုသူ့လက်ဝါးကြီးကို ခပ်အုပ်အုပ်ကိုင်ကာ ကျွန်မရဲ့ ကုန်းမော့မော့ ဆီးခုံပြင်ကိုတစ်ဖတ်ဖတ်ရိုက်ပါ တော့သည်။ စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့ နာသလိုလိုရှိသော်လည်း ခံလို့တော့အကောင်းသားရှင့်။ဟောကြည့် ဖားခုံညင်းလို့ ဖောင်းကြွတက်လာတာပဲသူကပြော၍ ကျွန်မကကြည့်လိုက်ရာ ကျွန်မဟာလေးမှာ တကဲ့ကိုပဲဖောင်းဖောင်းမို့မို့နှင့်ချစ်စရာကလေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါ၏။ကိုယ့်ဟာကိုလဲ ကြည့်ပါအုန်း စိန်စိန်…… သူကပြောပြောဆိုဆို လုံချည်ချွတ်လိုက်တော့မှ သူ့ဟာကြီးကပချုပ်ထဲကထွက်လာတဲ့ မြွေဟောက်ကြီးလိုဘဲ ငေါက်ကနဲထွက် လာပါသည်။အား…………အား………….မဲမဲတုတ်တုတ်နဲ့ တောက်တဲ့ကြီးပါလားလေးကလန်တက်နေရာ အသားနုနုကလေးက ဖြူဆွတ်နေပါသည်။
ကျွန်မက မရဲတရဲနဲ့ကိုင်ကြည့်လိုက်တော့ တကတဲရှင် ကျောက်ခဲလိုဘဲ မာတောင့်နေပါတယ်။ ခင်မောင်ဦး ဟာ ဖြူဖြူဝင်းဝင်းနဲ့ ခြောက်လက်မလောက်ရှည်ပြီး တစ်လက်မခွဲလောက်တုတ်ပါသည်။ သူ့ဟာကတော့ ရှစ်လက်မကျော်ကျော် လောက်ရှည်မည်ထင်ကာ လုံးပတ်က သုံးလက်မကျော်ကျော်ရှိလိမ့်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်လဲ သူ့ကို မိန်းမတိုင်းက တစ် ခါတွေ့ရင် စွဲကြတာပါဘဲလေ။ ကျွန်မလဲ ကိုင်ကောင်းကောင်းနဲ့ သူ့ဟာကြီးကိုဆုပ်ဖျစ်ညှစ်ကြည့်နေမိရာ အသက်ဝင်လာသည်ဟု ထင်ရအောင် ပို၍ကြီးထွားလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ သူ့လက်ကလဲ ကျွန်မရဲ့အစေ့ စူးညှောက်ကလေးကို မထိတထိကလိပေး နေရာ ရှေ့သို့လက်မဝက်လောက်စူထွက်ပြီးတောင်လာပါသည်။ ဒီတော့ သူကမရွံမရှာပင် ကျွန်မအခေါင်းကိုလက်ချောင်းထိုးနှိုက်သွင်းလိုက်ပြီး စမ်းကြည့်ရာအရည်တွေအရွဲသားဖြစ်နေသည်ကို မောင်မင်းကြီးသားတွေ့သွားရပါသည်။မမစိန်…….ရယ်ဒီဖြစ်နေပီလားလိုသူကပြောလိုက်ပါသည်။ကဲ နေရာယူပေတော့ ဒီညတော့ အစိန့်ကို မောင်ကြီးက လောကကြီးမှာ အစိန်တစ်ခါမှမခံစားဘူးသေးတဲ့ အရသာကိုပေးမှာပဲ ကျွန်မမှာ ထိုအချိန်တွင် ကိုယ်တုံးလုံးကြီးဖြစ်နေပါသည်။
သူကလည်း ကိုယ်တွင်စွပ်ကျယ်လက်ပြတ်လေးတစ်ထည်သာ ကျန်ပါသည်။ ကျွန်မကို ကုတင်စောင်းတွင် စောင်နှစ်ထပ်ခုပြီးထိုင်စေပါသည်။ ကျွန်မကျောမှီဖို့ နောက်တွင်ခေါင်းအုံးတွေခုပေးပါသည်။ ကျွန်မက ခေါင်းအုံးကိုမှီလိုက်တော့ ကျွန်မကိုယ်သည်ရှေ့သို့ခပ်ကော့ကော့ကလေးဖြစ်နေရာ ကျွန်မအင်္ဂါဇာတ်အရှေ့သို့ ပြူးထွက်ပြီး တံခါးလေးမှာဟလျက်သားကလေးပွင့်နေရာ အတွင်းသားနီနီရဲရဲကလေးကိုပင် တွေ့နေရပါသည်။ ကျွန်မပေါင်နှစ်ဖက်လုံးကတော့ ဘေးသို့ခပ်ကားကားခွဲနေပါသည်။ ကိုစောမောင်က ကျွန်မပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင်ဝင်နေပါသည်။ ပြီးတော့ သူ၏မတ်တောင်နေသော အတံကြီးကို ကျွန်မလက်နှင့်အ ကိုင်ခိုင်းပြီး ကျွန်မရဲ့တံခါးဝတွင်တေ့ပေးခိုင်းပါသည်။ တေ့မိသည်ဆိုသည်နှင့် တပြိုင်နက် သူကကျွန်မခါးကိုဆွဲ သူ့ခါးကိုကော့ပြီး ဆတ်ကနဲ ထိုးသွင်းချလိုက်ရာ ကျွန်မမှာ အမေ့ ဟုပင် ယောင်အော်လိုက်မိတာပါပဲလေ……….။ ဘယ့်နှယ်ရှင် သူ့ဟာကြီးက ဝင် တယ်ဆိုဝင်မှန်းသိပ်သိသာတာကလား။ ကျွန်မရဲ့သားအိမ်ဝကို ချက်ချင်းသွားထိရုံမျှမက အသည်းကိုတောင်ခိုက်သွားရသလား ဟု ထင်မှတ်လိုက်ရပါသည်။ ကျွန်မက ခေါင်းအုံးတွင်မှီမနေနိုင်တော့ပါ။ သူ့ခါးကြီးကို သိမ်းကြုံးဖက်လိုက်ပြီး ကျွန်မကိုယ်ကို သူ့ကိုယ်နှင့်ပူးကပ်ထားလိုက်မိပါသည်။ သူကတော့ ရှေ့တိုးနောက်ငင်မှန်မှန်ကြီးလွုပ်ရှားနေရာ လေးငါးချက်ဆိုလျင်ပင် ကျွန်မမှာပါးစပ်မှတဟင်းဟင်းဖြစ်လာမိပါသည်။ သူ့ရင်အုပ်ကြီးကို ကျွန်မကသွားများနှင့်မချင့်မရဲနေအောင်ကိုက်ခဲမိပါသည်။ သူကလည်း ကျွန်မတင်ပါးကြီးတွေကို သူ့လက်ကြမ်း ကြီးတွေနှင့် တစ်အားဆုပ်နယ်နေပါသည်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မမှာတကဲ့ကိုထူးခြားလှသည့် လောကအရသာကိုခံစားရပါသည်။ သူက လေးငါးချက်ဆက်ကာဆက်ကာ ဆောင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျွန်မအင်္ဂါဇာတ်မှာ အရည်တွေရွဲထွက်လာပြီး နောက်တ ခဏချင်းမှာပင် အကြောပေါင်းတစ်ထောင်တောင်စိမ့်တက်သွားစေတဲ့ အရသာကိုဆွေမျိုးမေ့သွားရမတတ် ခံစားလိုက်ရပါတော့ သည်ရှင့်။
အီး…………အီး………….အီးအီးကျွန်မက သူ့ကျောပြင်ကြီးကိုအတင်းသိုင်းဖက် ကျွန်မဟာကိုသူ့ဟာတွင် အတင်းထိုးကပ် ကာ ညီးသံကြီးနှင့်ပြောလိုက်ပါသည်။ ဘသားချောက တဟဲဟဲနှင့် အေးအေးဆေးဆေးရယ်လိုက်ပါသည်။ ပြီးတော့ သူ့ဟာကြီး ကို ကျွန်မဟာထဲက ပြွတ်ကနဲနေအောင် ဆွဲချွတ်လိုက်ရာ ကျွန်မစိတ်တွင် ဟာတာတာကြီးဖြစ်သွားမိတော့သည်။အစိန်က တယ်အပြီးမြန်တာကိုးကျွန်မကို သူက အဲ့ဒီလိုပြောပြီး ကျွန်မရဲ့စိုရွဲနေတဲ့အင်္ဂါဇာတ်ကို သူကလက်ကိုင်ပဝါနှင့်စင်ကြယ်အောင်သုတ်ပေးပါသည်။ တိုတို ပြောရလျှင် ကျွန်မနှင့်သူ ထိုညက မီးကုန်ယမ်းကုန်စခမ်းသွားလိုက်ကြသည်မှာ ကျွန်မနှစ်ချီပြီးမှသူကတစ်ချြီပီးပါသည်။ သူ့ကိုသုံး ချီပြီးမှ ကျွန်မမှာထိုညက ခြောက်ချီတိတိ အီသွားအောင်ခံစားလိုက်ရပါသည်ရှင့်…….။ နည်းကလည်းမျိုးစုံလှပါသည်။ ကုတင်စွန်း တွင် ကျွန်မထိုင်လျက် သူမမတ်တပ်တစ်မျိုး၊ ပြီးတော့ ကုတင်စွန်းတွင် ကျွန်မမှောက်လျက် ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပေးကာ သူက နောက်ကဝင်ပါသည်။ အဲဒီနည်းက ပိုပီးထိခိုက်လှပါသည်ရှင့်။ သူနဲ့ မီးကုန်ယမ်းကုန်တွေ့ကြရပြီး နောက်တစ်နေ့ကျတော့ ကျွန်မရဲ့ အင်္ဂါဇာတ်မှာ မခံမရပ်နိုင်အောင်ကျိန်းစပ်နေတော့ပြီး လမ်းလျှောက်ရင်လဲ ကွတကွတဖြစ်နေပါသည်။ နောက်ညတော့သူ့ကိုအတွေ့မခံဝံ့ပါ။ ကျွန်မက သူ့ကို တနင်္လာညနဲ့ကြာသပတေးညဘဲ အတွေ့ခံပါသည်။
ကျန်တဲ့ညများတွင်တော့ ကျွန်မရဲ့ဖောက်သည် ခင်မောင်ဦး နဲ့ပဲ ကိစ္စပြီးစေရပါသည်။ ကောင်ကလေးလည်း ဆရာကောင်းတပည့်မို့ သိပ်မညံ့လှပါ။ အခုဆိုလျှင် ကျွန်မမှာအသက်(၃၈)နှစ်ရှိ နေပါပြီ။ အပျိုကြီးဘဝမှာပဲရှိနေပါပေသည်။ အသားအရေတွေကလည်း စိုစိုပြေပြေဖြစ်နေပါသည်။ ခင်မောင်ဦးက မိန်းမရသွားပါပီ။ သူ့အစားနောက်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြည့်ထားရပါသည်။ ကိုစောမောင်ကြီးကိုတော့ ကျွန်မရဲ့လက်ကိုင်ပါပဲ ရှင်တို့လဲ လာချင်လာကြလေ ……….အဟိ………..ကျွန်မကိုယ်ကြီးကို နိုင်ကြရင်ပေါ့။ ကျွန်မကတော့ တစ်သက်လုံးလင်ယူတော့မှာ မဟုတ်တဲ့ အပျိုကြီးပါပဲရှင်။ ကျွန်မနဲ့သူ နောက်ဆုံးတွေ့ရပုံကိုပြောရအုန်းမယ်။ အဲ့ဒီနေ့က အင်္ဂါနေ့ထင်ပါရဲ့ရှင် အိမ်မှာတွေ့တွေ့နေရတာ ငြီးငွေ့လွန်းလို့ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မကသူ့ကိုအပြင်မှာတွေ့ဖို့ချိန်းလိုက် တယ်။ ချိန်းလိုက်တဲ့အတိုင်း သူနဲ့ကျွန်မဟာ မြို့မရုံမှာ(၁၂)နာရီခွဲပွဲ ဘိုင်စကုပ်ဝင်ကြည့်ကြတယ်။ ဘိုင်စကုပ်ကြည့်တယ်သာဆို တယ်။ ကျွန်မဖြင့်ဘိုင်စကုပ်ကောင်းကောင်းမကြည့်လိုက်ရပါဘူးရှင်။ ဘယ်ကြည့်နိုင်မှာလဲရှင်… ဘသားချောကမီးမှိတ်သွားတဲ့အ ချိန်ကစပြီး လက်ချည်းပဲ ကမြင်းနေတော့တာလား။
နို့နှိုက် ဘာနှိုက်လိုက် နဲ့ ပေါင်ကြီးတွေကို ဖျစ်လား ဖျစ်ရဲ့လုပ်နေတော့တာကိုး။ ဒီလောက်တောင်ကဲလှတာ….ဒင်းတော့ နေနှင့်အုံးပေါ့လို့ ကျွန်မက တေးထားလိုက်မိတယ်။ ဒါနဲ့ ဘိုင်စကုပ်ပြီးတော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် တက္ကစီငှားပြီး အင်းယားအလယ်ကျွန်းကို စီးပြီးလစ်ခဲ့ကြတာပဲ။ အင်္ဂါနေ့ဆိုတော့ အင်းယားအလယ်ကျွန်းမှာလူတွေရှင်းနေတော့ ကျွန်မတို့အတွက် သိပ်လွတ်လပ်နေတာပေ့ါ။ ပထမတော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ရေဆင်းချိုးကြတယ်။ ပြောပါရစေတော့ရှင်။ ကျွန်မက ထမီရင်လျားနဲ့ရေဆင်းစိမ်နေတုန်း ကိုစောမောင်ဟာ ဘယ်ကလောက်များကဲလိုက်သလဲဆိုရင် ကျွန်မကို လာဖက်တော့တာပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်မရဲ့ထမီကိုအတင်းဆွဲလှန်ပြီး ရေထဲမှာပဲ သူ့ဟာကြီးလှန်လို့ကျွန်မဟာကိုထိုးတော့တာပါပဲရှင်ရယ်။ အမယ် ရေထဲမှလုပ်ရတာ တစ်မျိုးလေးအကောင်းသားရှင့် နှစ်ယောက်စလုံးက မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး မတ်တပ်သွားကြရတာရှင့်။ ကျွန်မကလည်း တစ်မျိုးတော့အဆန်းသားဆိုပြီး ပေါင်ကြီးတွေကိုကားပေးလိုက်တယ်။ သူကလဲ ရေထဲကနေပြီး ကျွန်မပေါင်ကြားထဲဝင်လာတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်မက သူ့လည်ပင်းကိုရီးလေးခိုဖက်ပြီး ကျွန်မပေါင်ကြီးတွေနဲ့ သူ့တင်ပဆုံတွေကို ချိတ်ထားလိုက်တာပဲ။ အဲ့ဒီအခါမှ သူက ကျွန်မတင်ပဆုံကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်ယှက်ပင့်ထားပြီး ကျွန်မရဲ့ရေထဲမှာ ဟပြဲနေတဲ့အပေါက်ကြီးထဲကို သူ့အတံကြီးကို ထိုးထည့်ပီး စခမ်းသွားနေတော့တာပဲ။
သူက ဆောင့်သွင်းလိုက်တိုင်း ရေထဲကနေ ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ ပလုံစီတက်လာတယ်ရှင့်။ ဒါပေမယ့် ရေထဲမှာကိစ္စမပြီးကြပါဘူးရှင်။ ရေထဲမှာလုပ်ရတာ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ စမ်းကြည့်ရုံလောက်ပါဘဲ။ နှစ်ယောက်စလုံး အားမရကြတော့ ကမ်းစပ်ပေါ်တက်လာကြပြီး ကျွန်မက ခြေတစ်ပိုင်းရေထဲဆင်းလို့ ကမ်းစပ်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန် ပေါင်ကားပေး ကိုစောမောင်ကပေါင်ကြားကဝင်ပြီး လှေကြီးထိုးရိုးရိုးအတိုင်း စခမ်းသွားနေကြတာပါပဲရှင်။ နှစ်ယောက်စလုံးက မာန်ပြင်းနေကြတော့ အဲ့ဒီနေရာမှာပဲ ကျွန်မနဲ့သူဟာ နှစ်ချီဆက်တိုက်စခမ်းသွားပစ်လိုက်ကြတယ်ရှင့်။ နှစ်ချီပြီးတော့ ကိုစောမောင်ဟာ တော်တော်ပျိုင်းနေပီ။ ကျွန်မကတော့ ဆာတုံးပေါ့ရှင်။ ဒါနဲ့နာရီဝက်လောက်နားပြီးတော့ ကျွန်မကသူ့ကိုခြုံကွယ်တစ်ခုဆီအပါခေါ်သွားပြီး သူ့ကိုမြေကြီးပေါ်ပက်လက်လှန်အိပ်ခိုင်း သူ့အတန်ကြီးမတ်မတ်ထောင်တက် လာအောင် ကျွန်မလက်နဲ့ဆွပေးရတာပေါ့။ (၁)မိနစ်လောက်ဆွပေးလိုက်တော့မှဘဲ သူ့ရဲ့ပျော့ခွေနေတဲ့အတံကြီးဟာပြန်ပြီးမာတောင်လာတယ်လေ။ ဒါနဲ့ကျွန်မလည်း ထမီကိုအသာမပြီး သူ့ရဲ့ဆီးစပ်ပေါ်ဆောင့်ကြောင့်ခွထိုင်ရတာပေါ့။ သူ့အတံကြီးကို ကျွန်မအခေါင်းဝတေ့ပြီး အသာကလေးထိုင်ချလိုက်တာ လျောကနဲဝင်သွားတော့တာပေါ့။ ဒီနည်းကတော့ အတော့်ကိုအထူးသားလား ကျွန်မအတွက်သိပ်အားရစရာကောင်းတာပါဘဲ။ ကိုစောမောင်ကတော့ အောက်ကနေ ကျွန်မတင်ပါးကြီးတွေကိုင်ထိန်းပေးထားပြီး မလွုပ်မရှား မျက်တောင်ကြီးတွေစင်းလို့ ငြိမ်ပြီး ဇရက်မင်းစည်းစိမ်ခံနေတော့တာပါပဲလေ ………ပြီးပါပြီ။
Covid-19 ကာကှယျကုသရေး အတှကျ စဈတှေ ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးသို့ ဦးဇျောဇျောမှငှကေပျြ သိနျး(၂၈၀) သှားရောကျလှူဒါနျ
© 2020 CeleTrend • Built with GeneratePress